Sucuudi Carabiya oo wiil u dileysa dambi uu galay carruurnimadiisa - BBC News Somali
Sucuudi Carabiya oo wiil u dileysa dambi uu galay carruurnimadiisa
Lahaanshaha sawirka AMENSTY
Image caption Murtaja Qureiris
Murtaja Kureyris oo ah wiil yar oo u dhashay dalka Sucuudiga ayaa wajahaya suurtagalnimada ah in lagu rido xukun daldalaad ah kaddib markii lagu helay dambiyo uu galay xiliggii uu ahaa 13 jirka.
Ha'yadda Amnesty International waxay ugu baaqday dowladda Sucuudiga inay meesha ka saarto xukunka dilka ah ee ka dhanka ah wiilkan yar oo la xiray xilli uu ka qeyb qaadanayay dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda Sucuudiga.
Kureyris oo hadda jiro da'da 18, waxaa xabsiga loo taxaabay bishii September ee sannadkii 2014-kii, waxaana lagu xiray xabsiga carruurta ee ku yaalla magaalada Dammaam.
Waxaa uu ku jiray xabsi gaar ah, waxaa uu la kulmay tacaddiyo isugu jiro garaac iyo handdadaad markii saraakiisha xabsiga ay su'aalaha weydinayeen.
Gabadh hadal ay masayr u tiri xabsi ku mutaysatay